Bayalwe ngenhlonipho abaseMvunulo | News24
Bayalwe ngenhlonipho abaseMvunulo
06:01 08/08/2018 Lethiwe Makhanya
ABAFUNDI besikole samabanga aphakeme iMvunulo bathole ithuba eliyingqayizivele ngesikhathi bethola ukwelulekwa ababengabafundi bakusona lesi sikole asebephumelele.
Lo mcimbi obekungowo kuqala wenzeka bungo Lwesithathu olwedlule mhla zingama-25 kuNtulikazi (July).
Laba bafundi akade begcwele bechichima ehholo lendawo bayalwe ngokubaluleka kwemfundo nokuhlonipha othisha babo esikoleni.
uMnuz Brian Gwamanda nokunguyena obeyisikhulumi sosuku utshele abafundi ukuba uma kungukuthi bayehluleka ukuhlonipha othisha babo esikoleni ngeke baze baye ndawo empilweni.
Uthe: “Othisha benu bafana nabazali benu ngoba nichitha isikhathi esiningi nabo futhi yibona ababona kuqala uma kukhona into engalungile ezimpilweni zenu yingakho kubalulekile ukuthi nibahloniphe futhi nibalalele.
“Kumele niqaphele nabangani enizibandakanya nabo ngoba banomthelela ekusaseni lezimpilo zenu.
Uma uzibandakanya nabangani abangalungile nawe uzogcina ufana nabo ungasazazi ukuthi uqhamukaphi okanye uyaphi,” kubeka yena.
Uphinde wayala intsha ngokuba iyeke ukusebenzisa indawo okanye ikhaya abaphuma kulona njengento yokuzivikela ukuba bangabi nezimpilo ezingcono.
“Into ebalulekile ukuthi wazi ukuthi ufunani empilweni kanjalo nokuthi uzokwenza kanjani ukuze uyithole leyonto oyifunayo.Uma kungukuthi uyazazi ukuthi ufunani akumele uzihlanganise nabantu abangazazi ukuthi bafunani ngoba ayikho into ezolunga lapho.
Kubalulekile-ke nokuthi uma ngabe usuzazi ukuthi ufunani empilweni kodwa ube nanesikhathi ozikalela sona ukuze uyithole leyonto oyifunayo ngoba yonke into inesikhathi sayo futhi uwena ozenzelayo lesosikhathi.
“Ningasebenzi ukuhlupheka kwasemakhaya enu njengento enganivimba ukuthi niphumelele.Ukuba nekusasa eliqhakazile kulele kunina nasezandleni zenu.
Abazali benu bathembele kunina ukuthi nishintshe izimo zasemakhaya enu zibe ngcono ingakho bewe bevuka nani benza isiqiniseko sokuthi nilala nidlile nikwazi nokuya esikoleni. Phumani-ke esixukwini ukuze nizokwazi ukuqhakaza nifeze namaphupho enu. Ningalilahli ithawula uma sekuza ngasemaphuphweni enu,” kuphetha yena.
Uthishanhloko wakulesi sikole uMnuz Chonco uyale labafundi ukuba bafunde ngokuzimisela ukuze bezoba ngabaholi bakusasa.